Kusebenza kanjani ukuthengisa ngogesi? | Izindaba ze-ECommerce
Izibalo, i-CRM ne-Big Data
Kusebenza kanjani ukuthengisa ngogesi?
I-Encarni Arcoya | | Ukuthengisa oku-intanethi
I- ukuthengwa kwemikhiqizo online, okubuye kukhulise ukungabaza kanye nelukuluku lokuthi i ukuthengiselana ngogesi. Iningi lethu manje selingathenga online nge ukusetshenziswa kwamakhadi emali kagesi, okufanele siyibhalise emakhasini e-commerce uma sifuna ukwenza noma yiluphi uhlobo lokuthenga, lapho-ke sizochaza ukuthi yonke le nqubo yokuthenga isebenza kanjani kanye nezinyathelo zokuphepha ezithathwayo kulokhu.
1 Izinyathelo zokuthenga kwi-Intanethi
2 Kwenzekani ngemuva kokuthengiselana?
3 Wazi kanjani ukuthi ukuthengisa nge-elektroniki kuphephile
4 Ingabe ukuthengiselana nge-inthanethi kungakhanselwa?
Izinyathelo zokuthenga kwi-Intanethi
Ukuthenga online namuhla sekuyinto yamanje nekusasa. I- I-e-commerce boom iyiqiniso, yingakho ukwazi ukuthi umsebenzi wokuthengisa nge-elektroniki ubaluleke kanjani. Kokubili umthengisi nekhasimende.
Kodwa, Yini inqubo yokuthenga online? Siyakuchazela:
Umsebenzisi ufika ku-eCommerce ngoba ufuna umkhiqizo othile. Ukuze wenze lokhu, hamba uye ekhasini eliqondile, noma usebenzise injini yokusesha esitolo se-inthanethi ukuyithola.
Uma eseyitholile, umsebenzisi akasalanga yedwa naye; Kungenzeka ukuthi ubheke lo mkhiqizo ofanayo kwezinye izitolo bese uhlola lapho okukhokhela khona kakhulu. Lokhu kuzoya ngezindleko zokuthumela, intengo yomkhiqizo, ukutholakala, izindlela zokukhokha nezokuhambisa, nesikhathi sokuthumela.
Ngemuva kokunquma ukuyithenga, uzoqhubeka ubone indlela yokukhokha kepha okokuqala uzoqinisekisa ukuthi isitolo esikunikeza ukuzethemba, okungukuthi, ongacabangi ukuthi "ngumkhonyovu", "ukukhwabanisa" noma lokho uzolahlekelwa yimali yakho. Lesi ngesinye sezinyathelo ezibaluleke kakhulu ekuthengisweni kwe-elekthronikhi ngoba, uma umuntu ozokuthenga athatha isinqumo sokuthi awunakwethenjwa, noma ukuthi awumniki ukuvikelwa okwanele, angagcina engahambeli phambili (ku empeleni, kunamaphesenti aphezulu wabasebenzisi abasetha inqola ku-inthanethi kepha abaqhubeki ngale kwendlela yokukhokha, kungaba ngoba bengathembi, ngoba inani lokugcina libiza kakhulu kunakwamanye amasayithi noma ngoba bayazisola).
Uma beqhubeka, khona-ke ukuthengiselana kwenziwa ku-inthanethi (imvamisa kunekhadi lasebhange, kepha ezinye izinhlelo zokukhokha nazo ziyasetshenziswa njenge-Paypal, ukudlulisa, ukheshi ekulethweni ...) futhi ukuthengisa kuqediwe. Vele, ngeke ivalwe kuze kube yilapho ikhasimende lithole i-oda laso futhi lichitha izinsuku ezimbalwa ukubona ukuthi liyayibuyisa noma cha.
Kwenzekani ngemuva kokuthengiselana?
Ekuboneni kokuqala, okwenzekayo ukuthi singena kufayela le- iwebhusayithi e-shopping, Sikhetha imikhiqizo esifuna ukuyithenga, sixhumana nenqola yokuthenga bese ekugcineni sikhetha ukukhetha ukuyithenga, bese singena imininingwane yomuntu kanye neyekhadi lethu.
Ngamazwi anzima ngokwengeziwe; umsebenzisi ufaka ifayela le- iseva yokuthenga kanye ne-Secure Internet SSL Connection iyasungulwa. Ngemuva kwalokho, imininingwane iyiswa esangweni lokukhokha. Konke lokhu kudlula ngenqubo yokukhokha, ikhadi elisetshenziselwe ukuthenga liyamataniswa neBhange lifinyelelwa, elihlaziya imininingwane kucatshangelwa okuguquguqukayo okuningi ukunquma ukuthi okwenziwayo kusemthethweni yini.
Ngokuba ukuqinisekiswa kokuthengiselana amanye amasheke enziwa ngokususelwa kuma-algorithm ahlakaniphile afunda ngokuziphatha kwamakhasimende. Isibonelo: izindawo lapho uthenga khona kakhulu, izwe ohlala kulo, njll.
Konke ukuthenga okwenziwe ngekhompyutha kuhamba ngezinqubo ezahlukahlukene, lokhu kuncike kuseva okuyo nendlela owenza ngayo ukuthenga kwakho. Uma uya okokuqala kwifayela le- bethenga nge-inthanethiKhumbula ukuthi kukhona nezinye izindaba ezibaluleke kakhulu njengokuvikeleka kwekhadi lakho, okufanele ulinake ngaphambi kokuthenga okokuqala online.
Wazi kanjani ukuthi ukuthengisa nge-elektroniki kuphephile
Lapho uthenga online, ngaphandle kokuthi unolwazi oluningi, isinyathelo sokuqala siyabiza. Isizathu sokuthi kungani ukuthengiswa kwe-elekthronikhi, isikhashana manje, bekuyindlala futhi abantu babheke kahle ukuthi yini okufanele bayithenge ukuze bathathe leso sinyathelo.
Futhi yilokho, iqiniso beka imininingwane yakho, unikeze inombolo yekhadi lakho, noma okuthile okuxhumanisa nendawo ohlala kuyo noma ibhange lakho, Kukwenza wesabe, ikakhulukazi uma isitolo esiku-inthanethi ungazethembi.
Ngakho-ke, lapho wenza ukuthengisa nge-elekthronikhi, kubalulekile ukubheka izinto eziningana ezizokwenza amakhasimende azizwe ephephile. Yiziphi izinto?
Zama ukuveza ngokusobala idatha yakho. Cabanga ukuthi uya ekhasini lewebhu lapho bebeka khona imikhiqizo ishibhile kakhulu. Kodwa-ke, awazi ukuthi bazobathumela kuphi, uma baseSpain, uma kukhona umuntu noma inkampani ngemuva kwabo. Ayikho futhi indlela yokuxhumana nabo (ayikho i-imeyili, noma ifoni). Ungayethemba yini ukunikeza idatha yakho noma ngabe ishibhile kanjani? Cishe cha. Yebo, yilokho okufanele ucabange ukunikela obala kumakhasimende akho.
Nika amandla izindlela ezahlukahlukene zokukhokha. Abantu abaningi banqikaza ukuthenga online ngekhadi lasebhange. Kodwa-ke, ukudlulisa imali, ukuthola imali lapho uletha noma nge-Paypal kwamukelwa kakhulu. Uma unikela ngezindlela eziningi zokukhokha, futhi ungagcini kweyodwa nje, kuzobenza bazethembe kakhulu ukuthi ukuthengisa ngogesi kuphephile. Futhi ungacabangi ukuthi ngoba indlela yokukhokha ibiza kakhulu ngeke bayamukele; kwesinye isikhathi, ukuzama, basebenzisa indlela ebizayo ukwenza isiqiniseko, bese beya kokulula nokunethezeka kakhulu.
Sungula ukuphepha esitolo sakho esiku-inthanethi. Lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba udinga, ngokomthetho, ukuqinisekisa ukuthi izinkokhelo zakho ze-eCommerce zivikelekile futhi zivikelekile. Ukuthola kanjani lokho? Yebo, kuya ngohlelo osakhele kulo isitolo, ebhange lakho, njll. Okuhle kakhulu ukuzazisa ukuthi wazi ukuthi yimiphi imithethonqubo okufanele uyilandele nokuthi ungayenza kanjani, ikakhulukazi ukugwema izinhlawulo ezingase zikuwele.
Qhubeka wazise iklayenti ngazo zonke izinyathelo ezithathwayo. Imvamisa i-oda litholwa emahoreni angama-24-48, kepha kubalulekile ukuthi likhonjiswe ukuze kwaziwe ukuthi iziphi izifundazwe elidlula kuzo.
Ingabe ukuthengiselana nge-inthanethi kungakhanselwa?
Cabanga ukuthi usanda kuthenga okuthile futhi ngemuva kwemizuzu emihlanu, noma ngaphambili, usuzisolile ngokuthengiwe. Ukuyikhansela kuzoncika esitolo lapho usufike khona, kepha kukonke akulula njengoba kungaba yindaba yokuya esitolo sangempela ubuyise okuthengile.
Futhi yilokho kunezitolo eziku-inthanethi lapho kulula khona ukukhansela konke, njenge-Amazon, lapho ngokusho khona ukuthi uyithenge ngephutha, ngezinyathelo ezingama-2-3, uyixazulule. Kepha kuthiwani nge-eCommerce esele?
Isincomo sethu sinje:
Xhumana nebhange lakho. Uma unethuba lokungena nge-Intanethi, yenza kanjalo bese ukhansela ukuthengiselana okwenzile. Uma ungakwazi, shayela ibhange lakho ubacele bakusize ukulikhansela.
Bhala esitolo. Izitolo eziku-inthanethi zingaba nengxoxo, ukuxhumana nomphakathi, ucingo noma i-imeyili. Ungaxhumana nabo bese ubachazela inkinga eyenzekile ukuze bakwazi ukukhansela i-oda olifakile. Lokhu okuzokwenza ukubuyisela imali ebhange lakho.
Kwezinye izitolo nawe unethuba lokukhansela i-oda ngokwakho, ikakhulukazi ekuqaleni kwawo, lapho isalungiswa futhi ingathunyelwanga. Kepha uma uhamba isikhathi eside, kuzobanzima kakhulu ukuthi bakukhansele.
Kubalulekile ukuthi ukwenze ngesikhathi esifushane, ngoba uma i-oda lithunyelwe, ukwesulwa kunzima kakhulu ukukwenza, ikakhulukazi ngoba ingxenye yaleyo mali isivele isetshenzisiwe ukuthunyelwa. Ngemuva kwalokho kuzofanela wenze imali futhi bazokuthumela imali encane kunaleyo oyikhokhile (ngaphandle kwezinkampani ezinkulu ezinjengeFnac, Amazon ...).
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-ECommerce » Marketing » Ukuthengisa oku-intanethi » Kusebenza kanjani ukuthengisa ngogesi?
Ukuphepha kwewebhusayithi ye-Ecommerce
Izici ezihlukile ze-E-commerce Technology
Thola izindatshana zakamuva ku-eCommerce.